Fahitalavitra Philips vaovao miaraka amin'ny Twitter | Avy amin'ny Linux
Fahitalavitra Philips vaovao miaraka amin'ny Twitter
Ireo fahitalavitra vaovao an'ny orinasa holandey Philips, ampidiro ny lahasa izay mamela ny fidirana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fahitalavitra antsoina hoe nettv. Mpampiasa an'ny nettv Hanana safidy mahasoa izy ireo ho an'ireo izay tsy manana solosaina, ary izany dia afaka miditra amin'ny kaontiny izy ireo Twitter avy amin'ny fahitalavitrao mora sy haingana.
Araka ny hazavain'ny mpanamboatra azy, ny lahasa dia manome fidirana mivantana amin'ny tamba-jotra ary koa amin'ny atiny hafa ankehitriny toy ny vaovao, fampahalalana ny toetr'andro, mozika ary koa ny horonan-tsary misy famaritana avo lenta (HD) amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra sy ny menio tsotra izay mampiditra ny sehatra.
NetTV dia misy amin'ny fahitalavitra LED Philips maromaro, manokana ao amin'ny tandavan Ambilight 7000,8000,9000 sy amin'ny fahitalavitra ultra-wide misy fifandraisana WiFi Sinema Ambilight 21: 9 Platinum.
Azo atao koa ny miditra nettv avy amin'ny fahitalavitra misy marika hafa toa ny Sony o LG misaotra an'ireo mpilalao Blu-ray vaovao amin'ilay andian-tantara voalaza etsy ambony sy ny rafitra Home Theater Immersive Sound HD miaraka amin'i 360Sound by Philips.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Fahitalavitra Philips vaovao miaraka amin'ny Twitter
Yacy: motera fikarohana Internet itsinjaram-pahefana mifototra amin'ny p2p